स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले किन यसरी थर्काए ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ? प्रश्न सोध्न पनि दिएनन् (भिडियो हे’र्नुस्) – Sadhaiko Khabar
स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले किन यसरी थर्काए ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ? प्रश्न सोध्न पनि दिएनन् (भिडियो हे’र्नुस्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: २२:३५:१८
काठमाडौ । भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक अभियान संचालन गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री हृदयस त्रिपाठीले थर्काएका छन् । उनको बोल्ने र आरोप लगाउने शैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीले थर्काएका हुन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट लिएर मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको ज्ञानेन्द्र शाही र उनको समुहबीच मन्त्रीको विवाद समेत भएको छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले अन्य क्षेत्रमा बोलेजस्तै अलि उग्र तरिकाले प्रश्न गर्न खोजेका थिए । तर मन्त्रीले आफु भ्रष्टाचार विरुद्धको विषयमा डिग्री लिएको र सार्वजनिक लेखा समिती, महालेखाको वार्षीक प्रतिवेदनमा पनि २०४८ साल देखि नै सहभागी भएकाले यो विषयमा निकै जानकार भएको बताएका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको धेरै समय नभएकाले सुधारको लागि आफु खटेर लागेको बताएका छन् । हे’र्नुहोस् भिडियो:-
९०७ पटक हेरिएको